Fadlan Caawi Walaalka Muuse Sheekh Wehliye oo ku xanuunsanaya Magaalada Muqdisho. – Kismaayo24 News Agency
Aabe Muuse Sheekh wehliye waa Aabe Somaliyeed oo ku xanuunsanaya Magaalada Muqdisho ,waxaana Ehelkiisa ay war baahinta u Shegeen in muddo badan oo la xanuunsanaya Cudarka kansarka islamarkaana uu wehliyo Cudurka gaaska waxaana labadan Cudur ay dhibaato ba’an ku hayaan Caafimaadka Abahan Somaliyeed oo ka soo jeeda qoys dan yar ah.
Waa 53 Jir hadda ka xanuunaya xaafadda horsed ee Degmada Hodon ee Gobalka Banaadir,waxaana la geeyay dhowr Isbitaal si wax looga qabto Xaaladiisa Caafimaad,laakiin Nasiib darro Suuragal ma noqon in ay dhaqaatiirta wax kaqabtaan iyadoo dhaqaatiirta qaar ay ehelkiisa u shegeen in aan waxba looga qaban kirin Dalka Guduhiisa,taa badalkeedana loo baahan yahay in dhaqtar dalka dibadiisa la geeyo si wax looga qabto Xaaladdiisa Caafimaad .
Maxamed Cabdi Nuur Dhaqane oo lahadlay Warbaahinta ayaa Sheegay in uu ka sii daray Xaaladda Caafimaad ee Muuse Sheekh Wehliye ,waxaana uu mahadceliyay dad Somaliyeed oo qaarkood ka damqaday Xanuunka haya walaalkiisa wuxuna xusay in ay laga mamaarmaan ay tahay in Walaalkiis uu u baahan yahay in loo qaado dalka dibadiisa.
“ Afka waxba kama cuni karo waxaana ku adag in Cuntada ay dhuuntiisa maraan laakiin waxaa cuntada lagu siiyay tubo ku jirto qeyb kamid ah Jirkiisa oo qalliin lagu sameeyay “ ayuu yiri Maxamed Cabdu Nuur Dhaqane oo Warbaahinta la hadlay.
Aabahan ku xanuunsanaya Magaalada Muqdisho waxaa uu leeyahay dhowr Caruur ah oo uu uxamaali jiray ama uu u raadin jiray qutul yoon kooda ,qoyskiisana waa kuwo aad u dan yar wuxuuna u baahan yahay in ay garab hagar la’aan ah ay siiyaan Dhammaan walaalaha Somaliyeed ee Allaah wax siiyay .
Ogow waxa ay ku sadaqeysato dhibanahan bukaanka waxa ay kuu hiyiin Sadaqo waxaadna bad baadisay qoyska dhan ,maadaama uu ahaa Qofka kali ah ee u shaqeyn jiray qoyska uu aabaha u yahay.
Hadaba waxaad kala xiriiri kartaa Numbaradan oo ay qoyskiisa wataan waliba dadka isaga ka ag dhow.
Accoun Salam Bank
Ra’isul wasaare kheyre iyo Wafdigiisa oo goordhaw ka dhoofay Garoonka Aadan Cadde
admin 15th November 2017 15th November 2017
DEG DEG: Dowladda soomalia o jawaab kulul ka bixisay digniinta ka soo baxday alshabaab ee ku wajahan goobaha waxbarashada